भारतको किर्तिमान तोड्दै डीसीका कराते खेलाडी उज्ज्वल ठकुरीलाई तेश्रो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड प्राप्त (भिडियो सहित ) - Namasteholland, News, Information and Technology
२४ मंसिर २०७५, सोमबार १२:५९0459
विजय थापा ,डिसी महानगर क्षेत्रका कराते खेलाडी उज्ज्वल ठकुरीलाई तेश्रो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड प्राप्त भएको छ । उनले भारतको किर्तिमान तोड्दै २ सय २६ घुँडा प्रहार गरि ठकुरीलाई उक्त बिश्व किर्तिमान पदक प्राप्त भएको हो । यस सहित ठकुरीलाई तेश्रो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएका छन् ।
काठमाडौँमा जन्मेका उज्ज्वल ठकुरी आमा जयन्ति शर्मा पौडेल तथा बाबु राजेन्द्र ठकुरीका जेठा सुपुत्र हुन् । तेश्रो पटक गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बिजेता ठकुरीले भर्खर मात्र ६ डान उपाधि प्राप्त गरि अमेरिकन मरिन गोजु कराते बाट सम्मानित भएका थिए । तेश्रो किर्तिमान संगै उनले ह्याट्रिक राख्न सफल भएका छन् । उनले यो भन्दा पहिला दुई विधामा खुट्टा फारेर (फांग गरेर) अधिक भार उठाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राखेका थिए ।
फांग (खुट्टा फारेर ) गर्ने यस्तो विधा हो जुन कराते,उसु र तेक्वान्दो ले प्रत्येक दिन कसरत गर्नै पर्छ । उक्त विधामा २ पटक पटक बिश्व किर्तिमान राखेका थिए । यो तेस्रो विधामा पनि ठकुरीले नेपाल र नेपालीको लागि अलग पहिचान बनाएका छन् । यो विधामा बिश्वका ठुला राष्ट्रहरु बेलायत ,चीन,रुस ,अमेरिका लगायत देशले पनि किर्तिमान राख्न न सकेकोमा ठकुरी गर्व गर्दछन ।
उनि भन्छन , एउटा नेपाली खेलाडी अमेरिकामा बसेर यी तीनै विधामा प्रत्येक दिन कसरत नगरी नहुने विधामा गिनिज बिश्व रेकर्ड राख्न सफल भएको छु । र मार्शल आर्ट्स (कौशल विधा)को मुख्य भाग चल्ने भनेको हात खुट्टा र घुडा हो अनि फांग(खुट्टा फार्नु ) गर्नु हो उनले थप गर्दै भने ।
तेश्रो बिश्व तेस्रो रेकर्डमा ३ मिनेटमा १ सय ८० घुडा प्रहार गर्नु थियो । जसलाई अग्रेजीमा नी (knee) र बेढंग लडाई (रफ फाइट)मा हिज्ज़ा भनिन्छ । यो किर्तिमान भारतका ग्रान्ड मास्टर जसलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्मान गरेका थिए उनको नाम जय नाथ रेड्डी थिए । उनको १० गिनिज रेकर्ड्स छ। उनको यो किर्तिमान देखेर उनलाई चुनौती दिन मन लागेर चुनौती गरेको बताए ।
जसको लागि आफूले निकै मेहनत र कडा परिश्रम गरेर तेश्रो बिश्व गिनिज रेकर्ड्स कायम गर्न सफल भएको बताए । उनको रेकर्ड्स ३ मिनेट मा १ सय ८० चोटी घुडा प्रहार गर्नु थियो । त्यो पनि नापेर छातीको स्तर साढे ३ फीट भन्दा माथि उनको रेकर्ड हेर्दा सुरुमा गरिएला जस्तो लागिएको थिएन ठकुरी भन्छन । तर छोराले आँटे पछि पुग्छ भनें सोचेर गरे अनि हासिल गरे उनि थप्दछन ।
यसको लागी एक दिन पनि आराम नगरी अहोरात्र खटे अनि यो किर्तिमान हुन् सक्यो उनि भन्छन । ठकुरीले १ किलो वजन समेत बोकेर ३ मिनेट मा २ सय २६ चोटी प्रहर गर्न सफल भए । भारतको किर्तिमान भन्दा एक मिनेट मा ८९ घुडा प्रहार ज्यादा हुन् गएको छ । सबै नेपालीको लागि र नेपालको लागि तीन पटक अर्थात् ह्याटट्रिक गर्ने सपना भएकोले गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता र दृढ संकल्प भयएकोले सबैको आशिर्बाद र माया पाएकोले यो सम्भव भयो उनि भन्छन ।
आफूलाई हृदय देखि नै संधै सहयोग गर्नु हुने डीसी क्षेत्रका लागि नेपाली मूलका तेक्वान्दो प्रशिक्षक मास्टर कृष्ण बहादुर बलाल र वहाको समूहलाई कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । उनले भाबुक हुँदै आफ्ना माता पितालाई सम्झन चाहेको बताए । र आमा क्यान्सर(अबुर्द)रोग बाट बित्नु भएको हो भन्दै यदि जीवित हुनु भएको भए कति गर्व गन्रु हुन्थ्यो भनि आफ्ना भावना पोखेका छन् ।
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०९:३३0274
२५ असार २०७६, बुधबार ०९:५७0264
१५ बैशाख २०७६, आईतवार १५:२६0326
Hey Buddy!, I found this information for you: "भारतको किर्तिमान तोड्दै डीसीका कराते खेलाडी उज्ज्वल ठकुरीलाई तेश्रो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड प्राप्त (भिडियो सहित )". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a4%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%88/. Thank you.